October 2020 - NepTimes
မြန်မာ့ပြည်တွင်းထုတ် (F-11) Aung Zay Ya Frigateကြီးအကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း။
a fella | 31/10/2020
မြန်မာ့ပြည်တွင်းထုတ် (F-11) Aung Zay Ya Frigateကြီးအကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း။ 🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲 ထို Frigate ကြီးကို မြန်မာ့🇲🇲 တပ်မတော်ရေ၏ ပြည်တွင်း သင်္ဘောကျင်းတွင် 2008ခုနစ်၌ စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး 2010 တွင် မြန်မာ့ရေတပ်သို့တပ်တော်ဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို Frigate ကြီးပြီးမှ Kyansitthar အတန်းစား Frigate ကြီးများကို တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို
“ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိုမင်းလွှမ်းမိုးချင်ရင်ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုမှာရှိတဲ့ chokepoints တွေကိုထိန်း ချုပ်ဖို့လိုတယ်” (Emmanuel Bautista ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်အကြီးအကဲဟောင်း) ဖိလစ်ပိုင်မှတဆင့်မှတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းတောင်းဆိုမှုကိုအတည်ပြုရန်တရုတ်က”မီးခိုး‌ရောင်ဇုံ”စစ်ပွဲစတင်‌လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်အကြီးအကဲ ဟောင်းကပြောကြားခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည်ယခုအခါသတင်း အချက်အလက်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အခြားနည်းဗျူဟာများဖြင့် ဖိလစ်ပိုင်ရှိ၎င်း၏မဟာ ဗျူဟာရည်မှန်းချက်များကိုအကောင် အထည်ဖော်ရန်”မီးခိုးရောင်ဇုန်” စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေပြီဟုဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်အကြီးအကဲဟောင်းကပြောကြားခဲ့သည်။ သမ္မတဟောင်း Benigno Aquino III ၏အစိုးရကာလအတွင်းဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်အကြီးအကဲ တာဝန်ယူခဲ့သူEmmanuel Bautista ကတရုတ်သည်ဖိလစ်ပိုင်၏ပိုင် နက်တွင်ခြေကုပ်ခိုင်မာရန်အတွက်အငြင်းပွားနေသောရေပိုင်နက်များကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သည့် “မီးခိုးရောင်ဇုန်”
ဒီမစ်ဒယ်ဝိတ်ခါးပတ်ရမှ( မြန်မာနိုင်ငံ) ပြန်လာမယ် ဆိုပြီး အောင်လအန်ဆန် ကြုံးဝါး ( ရုပ်သံကြည့်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ )
ဒီမစ်ဒယ်ဝိတ်ခါးပတ်ရမှ( မြန်မာနိုင်ငံ) ပြန်လာမယ် ဆိုပြီး အောင်လအန်ဆန် ကြုံးဝါး ( ရုပ်သံကြည့်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ ) *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ ဒီရိုက်ဒါရဲ့ ချုပ်ကွက်မိပြီး မထင်မှတ်ပဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အပေါ် အောင်လအန်ဆန် ကိုယ်တိုင်လည်း အတော်လေးကို မချိ တင်ကဲ ဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်ဟာ နယ်သာလန်နိုင်ငံသား ဒီရိုက်ဒါကို ပထမအချီနဲ့တင် မထင်မှတ်ပဲ အရေးနိမ့်ခဲ့
ဂျပန်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ နဲ့ အမေရိကန်ရေတပ်သုံး ကုန်းရေ ၂ ထွေးသွားနိုင်သော LCAC (Landing Craft Air Cushion) အကြောင်း တစေ့တစောင်း…
ဂျပန်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ နဲ့ အမေရိကန်ရေတပ်သုံး ကုန်းရေ ၂ ထွေးသွားနိုင်သော LCAC (Landing Craft Air Cushion) အကြောင်း တစေ့တစောင်း… LCACတွေဟာ ကုန်းရေ ၂ ထွေးသွားနိုင်တဲ့ ရှပ်ပြေးယာဉ်တွေဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရေတပ်ရဲ့ Assault Craft Units နဲ့ ဂျပန်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ the Japan Maritime Self-Defense
တရုတ်က ကမ္ဘာကို လွှမ်းမိုးမှုက အရမ်းနီးကပ်နေဟု ပေကျင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ ဂျာမန် ထောက်လှမ်းရေးခေါင်းဆောင်ဟောင်း သတိပေး
တရုတ်က ကမ္ဘာကို လွှမ်းမိုးမှုက အရမ်းနီးကပ်နေဟု ပေကျင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ ဂျာမန် ထောက်လှမ်းရေးခေါင်းဆောင်ဟောင်း သတိပေး *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ တရုတ်၏ ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်မှုဆဲဆဲခြိမ်းခြောက်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဂျာမန်ထောက်လှမ်းရေး ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတစ်ဦးမှ သတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ဖက်ဒရယ်ထောက်လှမ်းရေးဌာန အကြီးအကဲဖြစ်ခဲ့သူ ဂါးဟတ်ဒ် ရှင်ဒလားသည် ဥရောပနိုင်ငံများအား ပေကျင်းအပေါ် “မဟာဗျူဟာကျ
တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမေရိကန်နှင့်စစ်ရေးတင်းမာနေမှုများကို လျှော့ချရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ထုတ်ပြန် ( ဒီလိုလေသံ ပျော့ပျော့လေးနဲ့ ရွှေပြည်အေးတရား ဟောလာတာ ခေါင်းမာတဲ့ သာကော နဂါးမှ ဟုတ်ရဲ့လား…..)
တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမေရိကန်နှင့်စစ်ရေးတင်းမာနေမှုများကို လျှော့ချရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ထုတ်ပြန် ( ဒီလိုလေသံ ပျော့ပျော့လေးနဲ့ ရွှေပြည်အေးတရား ဟောလာတာ ခေါင်းမာတဲ့ သာကော နဂါးမှ ဟုတ်ရဲ့လား…..) *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြာသပတေးနေ့က ပြောကြားရာတွင် တရုတ်နှင့်အမေရိကန်တပ်မတော်တို့အနေဖြင့် လက်တွေ့ကျကျတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းနှင့် ယခုနှစ်ကုန်တွင် ရေကြောင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအပါအ၀င်ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုများပိုမိုပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ စစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူများက ထိုခိုင်မာသော ကြေညာချက်သည်
အာမေးနီးယန်းတို့၏ S-300 စနစ်ပေါင်း ၆ ခုကို ဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ဟု အဇာဘိုင်ဂျန်သမ္မတဝင့်ကြွားလာ ( ဒရုန်းအစွမ်းကတော့ အံ့မခမ်းပါပဲ….)
အာမေးနီးယန်းတို့၏ S-300 စနစ်ပေါင်း ၆ ခုကို ဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ဟု အဇာဘိုင်ဂျန်သမ္မတဝင့်ကြွားလာ ( ဒရုန်းအစွမ်းကတော့ အံ့မခမ်းပါပဲ….) *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ အဇာဘိုင်ဂျန်သမ္မတ Ilham Aliyev က ၎င်းတို့တပ်မတော်အနေဖြင့် တူရကီနှင့်အစ္စရေးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအား အသုံးပြု၍ အနည်းဆုံးအာမေးနီးယား S-300 ဒုံးကျည်စနစ်ပေါင်း ၆ ခုကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ခေတ်သစ်စစ်ဆင်ရေးနည်းလမ်းတွေဟာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွေနဲ့
အစိုးရအဖွဲ့အတွက် အီတလီနိုင်ငံမှ ဝယ်ထားသော ရဟတ်ယာဉ် မြန်မာနိုင်ငံရောက်ပြီ ( တစီးကို တန်ဖိုးငွေယူရို ၁၃.၂၇၂ သန်းတန်ကြေးရှိ တယ်လုိ့သိရပါတယ်)
အစိုးရအဖွဲ့အတွက် အီတလီနိုင်ငံမှ ဝယ်ထားသော ရဟတ်ယာဉ် မြန်မာနိုင်ငံရောက်ပြီ ( တစီးကို တန်ဖိုးငွေယူရို ၁၃.၂၇၂ သန်းတန်ကြေးရှိ တယ်လုိ့သိရပါတယ်) *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ အစိုးရအဖွဲ့အတွက် အီတလီနိုင်ငံမှ ဝယ်ထားသော ရဟတ်ယာဉ် မြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ကနဦးသတင်းများအရ သိရပါတယ်။ အီတလီမှဝယ်ယူထားသော ရဟတ်ယာဉ် (မြန်မာမှတ်ပုံတင်အမှတ်XY-AFT) သည် ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၃၀
ခါးပတ်လုသွားသူ နယ်သာလန်သား ဒီရစ်ဒါကို ပြန်စိန်ခေါ် ပြီးပြန် ထိုးသတ် ဖို့လည်း အဆင် သင့် “ပါ ပဲ လို့ အောင်လအန်ဆန် စိန်ခေါ်….
ခါးပတ်လုသွားသူ နယ်သာလန်သား ဒီရစ်ဒါကို ပြန်စိန်ခေါ် ပြီးပြန် ထိုးသတ် ဖို့လည်း အဆင် သင့် “ပါ ပဲ လို့ အောင်လအန်ဆန် စိန်ခေါ်…. *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ ရိုင်နာ ဒီရစ်ဒါ နဲ့ ရှေ့ပွဲ မှာ ချက်ချင်း ပဲ စိန်ခေါ် ပြီး ရွှေခါး ပတ်
တရုတ်တို့ ထိန်းချုပ်ထားပြီး တကျော့ပြန် ခေါင်းထောင်လာပြန်တဲ့ မြေရှားဓာတ်သတ္ထု RARE EARTH ELEMENTS (REES) ပြသာနာ… (မြေရှားဓာတ်သတ္တု REEs တွေရဲ့ 80% ကျော်ကို တရုတ်က ထွက်ရှိ ထိန်းချုပ်)
a fella | 30/10/2020
တရုတ်တို့ ထိန်းချုပ်ထားပြီး တကျော့ပြန် ခေါင်းထောင်လာပြန်တဲ့ မြေရှားဓာတ်သတ္ထု RARE EARTH ELEMENTS (REES) ပြသာနာ… (မြေရှားဓာတ်သတ္တု REEs တွေရဲ့ 80% ကျော်ကို တရုတ်က ထွက်ရှိ ထိန်းချုပ်) *အောက်တွင် ယူနီကုတ်ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ US သမ္မတ ထရမ့်က Rare Earth Elements မြေရှားဓာတ်သတ္တု